OTU ESI EDEKỌ IHE NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Anyị dee ihe na Photoshop
Na nke a, anyị ga-ekwu banyere otu esi eji ohere nke ịmepụta egwuregwu onwe gị.
Ihe ndị a dị oké mkpa iji rụọ ọrụ ma ọ bụ na-agba ọsọ nhazi nke nnukwu ọnụ ọgụgụ faịlụ, ma otu iwu ahụ kwesịrị iji ebe a. A na-akpọkwa ha ọrụ ma ọ bụ omume.
Ka anyị kwuo na ịkwesịrị ịkwado maka akwụkwọ ahụ, dịka ọmụmaatụ, ihe osise dị ogo 200. Njikarịcha maka weebụ, ịmaliteghachi, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eji hotkeys, were gị ọkara otu awa, na ikekwe ogologo, ọ na-ejikọta ike nke ụgbọ ala gị na dexterity nke aka gị.
N'otu oge ahụ, ebe ịdekọtara ihe dị mfe maka ọkara nkeji, ị ga-enwe ohere ịnyefe ọrụ a na kọmputa ahụ mgbe gị onwe gị na-etinye aka n'ihe ndị dị mkpa.
Ka anyị nyochaa usoro nke ịmepụta macro, iji kwadebe foto maka mbipụta na akụ.
Mepee faịlụ na usoro ihe omume ahụ, nke a ga-akwado maka akwụkwọ na akụ.
Mwepụta panel ahụ Ọrụ (Omume). Iji mee nke a, ị nwekwara ike pịa ALT + F9 ma ọ bụ họrọ "Ohere - Ọrụ" (Ohere - Omume).
Pịa na akara ngosi na akụ ahụ na-atụgharị ma chọọ maka ihe dị na listi ọdịda. "Ọhụụ ọhụrụ" (Ihe ohuru).
Na windo na-egosi, kọwaa aha ọrụ gị, dịka ọmụmaatụ "Na-edezi maka weebụ", wee pịa "Dekọọ" (Dekọọ).
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe onwunwe na-ebelata ọnụ ọgụgụ ihe osise e zigara ha. Dịka ọmụmaatụ, enweghị ihe karịrị pixels ise. Gbanwee nha dị ka ọnụọgụ abụọ ndị a. Gaa na menu "Foto - Ọdịdị Foto" (Foto - Ọdịdị foto), ebe anyị na-edepụta oke oke na elu 500 pixels, wee jiri iwu ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-amalite menu "Njikwa - Chekwa maka Web" (Njikwa - Chekwaa maka weebụ na ngwaọrụ). Kọwaa ntọala maka njikarịcha dị mkpa, kọwaa ndekọ ahụ iji chekwaa, gbanye iwu ahụ.
Mechie faịlụ mbụ. Anyị na-aza ajụjụ maka ichebe "Mba". Mgbe anyị kwụsịrị idekọ ọrụ site na ịpị bọtịnụ ahụ "Kwụsị".
Ihe zuru ezu. Ọ na-anọgide na anyị na-emepe faịlụ ndị ọ dị mkpa ka a hazie, kọwaa ihe ọhụrụ anyị mere na ihe omume ma malite ya.
Omume ahụ ga-eme mgbanwe ndị dị mkpa, chekwaa okirikiri oyiyi ahụ na ndekọ ahọrọ ma mechie ya.
Iji hazie faịlụ ọzọ, gbakwunye ihe ahụ. Ọ bụrụ na enwere ole na ole foto, mgbe ahụ, ị ​​ga-akwụsị ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọbụna ọsọ ka ukwuu, ị ga-eji usoro nhazi. Na ntụziaka ndị a, m ga-akọwa otú esi eme nke a.
Gaa na menu "Njikwa - Akpaaka - Nhazi usoro" (Njikwa - Akpaaka - Nhazi usoro).
Na windo egosipụtara anyị na-ahụ ihe anyị kere, mgbe - ndekọ na foto maka nhazi ọzọ.
Họrọ ndekọ ebe ịchọrọ ịzọpụta nsonaazụ nke nhazi. Enwere ike ịnyegharị ihe oyiyi site na template a kapịrị ọnụ. Mgbe i mechara ntinye ya, gbanwee usoro nhazi. Kọmputa ga-eme ya niile n'onwe ya.